Ikhwalithi Ephezulu YaseShayina I-XGN15-12 Uhlobo Lwebhokisi Engaguquki Insimbi Ye-AC Evaliwe Yesulfure I-Hexafluoride Loop Switchgear Factory abakhiqizi nabaphakeli |Shengte
Ikhwalithi Ephezulu XGN15-12 Uhlobo Lwebhokisi Olugxilile Lwensimbi Ye-AC Evaliwe I-Sulfur Hexafluoride Loop Switchgear Factory
Ibhokisi le-XGN15-12 uhlobo lwebhokisi elilungisiwe lensimbi ye-AC evalwe isibabule i-hexafluoride ring switchgear (SF6 switchgear) iyidivayisi yokusabalalisa yasendlini enezigaba ezintathu zamanje ze-12Kv kanye nemvamisa yesistimu yebhasi eyodwa engu-50Hz.
Isetshenziswa kakhulu emafektri, ezindaweni zokuhlala, izakhiwo eziphakeme kakhulu, amagridi kagesi asemadolobheni kanye neziteshi ezincane zokusabalalisa abasebenzisi bokugcina, iziteshi ezincane zamabhokisi.
Uhlaka lwekhabethe lokushintshwa kwe-SF6 lwakhiwa ngokugoba ipuleti lensimbi elivamile le-A3 (noma lihuqwe ngepuleti le-aluminium-zinc) libe amaphrofayili.Inobukeka obuhle, ukumelana nokugqwala okuqinile kanye nesakhiwo esihlangene nesinengqondo.
Inganwetshwa nganoma iyiphi inhlanganisela ngokuvumelana nezidingo ezihlukahlukene zokuklama.Kuyashesha futhi kulula ukuhlanganisa futhi kulula ukuyifaka.
I-SF6 switchgear ekhiqizwa futhi yahlanganiswa ngendlela evamile ingahlukaniswa ngegumbi lebhasi, igumbi lokushintshela, igumbi lemishini yokusebenza, igumbi lezinsimbi kanye negumbi lekhebula.
Ibhasi eliyinhloko legumbi lebhasi linganwetshwa kunoma yiluphi uhlangothi ngokunganaki.Ingakhiwa ama-switchgear amathathu ukuze yakhe iyunithi yenethiwekhi eyindandatho, noma inganwetshwa esiteshini esincane esinama-switchgear angaphezu kwamane.
Isistimu yokuxhumana yomthwalo we-SF6 kanye negumbi lokucisha i-arc livalwe emgqonyeni wokuvikela othelwa ngenqubo ye-epoxy resin APG, futhi igcwaliswe ngegesi ye-SF6 engu-0.045 MPa.Ngenxa yezixhumanisi ezimbalwa zokuvala, ingagcina ukuvuza komoya isikhathi eside futhi igweme ukulungiswa ekugcineni.
Ukuthintana okunyakazayo kwezigaba ezintathu kwe-F. switch switch kugxilwe ku-spindle evalekile, eqaphela ukuguqulwa kwezikhundla ezintathu zokusebenza zokuvala, ukuvulwa kanye nokubeka phansi ngaphansi kwesenzo sendlela yasentwasahlobo.Kuyiswishi yokulayisha enezindawo ezintathu.
Isifunda esiyinhloko se-analog kuphaneli yemishini kanye nenkomba yokuvula nokuvala exhunywe ngokuqondile ne-shaft eyinhloko ye-switch switch ingabonisa ngokucacile indawo yokuvala, yokuvala noma yokumisa phansi yeswishi yomthwalo.
Ukuze uvimbele ukusetshenziswa kabi, ama-padlocks angafakwa emigodini yokusebenza ye-shaft yomshini.
I-SF6 gas gas gauge, ukuthintana okuyisizayo, ikhoyili yohambo, idivayisi yokusebenza kukagesi, isifunda sokulawula, insimbi yokulinganisa kanye nedivayisi yokuvikela edluliselwe kungafakwa ngokuya ngezidingo zekhasimende.
Ikhabhinethi ye-SF6 ingabambisana ne-CTI spring mechanism plus FLN sulfur hexafluoride load switch (F cabinet) noma i-CTII double spring mechanism kanye ne-FLN sulfur hexafluoride load switch-fuse into compliance (FR cabinet).
Idizayini ehlukile yekhodi yekhona elinezinhlangothi ezintathu ayithuthukisi kuphela amandla nokuqina kozimele ngokwawo, kodwa futhi ithuthukisa ukunemba kohlaka kohlaka.
I-Fuse ene- impactor, noma yisiphi isenzo se-impactor yesigaba, idivayisi yokuxhuma i-trigger tripping, ivula ukushintsha kokulayisha.
Isembozo sokulinganisa i-voltage yamabhasi egatsha singenza iyunifomu yensimu kagesi futhi igweme amaphutha angaphakathi.
I-fuse kanye nokuphela koxhumano lwekhebula kufakwe ummese ophansi, oxhunywe nesisekelo sokushintsha komthwalo.
Umshini wokusebenza wasentwasahlobo uhlangana ne-cableroom yamandla kagesi aphezulu ukuze kuvinjwe umnyango wangaphambili ukuthi ungavuleki lapho iswishi ingekho phansi futhi nokuqinisekisa ukuphepha komsebenzisi.
Izintambo ezifanele zingakwazi futhi ukufaka izinto zokuvala umbani, ama-transformer amanje, ama-voltage transformer nokunye.
Umnyango wangaphambili onefasitela lokubuka kanye nedivaysi exhumanisa ukuphepha, elula futhi enhle ukulayisha nokuthulula.
Isixhumi sekhebula singaxhunywa ngokuqondile esihlalweni se-fuse ngaphansi kwe-fuse, noma kubha yethusi ecwecwe ngothayela ngezansi kwesihlalo se-fuse.Izinhlobo ezimbili zezixhumi zekhebula zisiza ukuxhunywa kwezintambo eziwumgogodla owodwa noma ezintathu-core ngekhanda lekhebula elivikelekile elilula kakhulu.
Uma kukhona amaphutha angaphakathi emakamelweni ebhasi kanye nekhebula lama-switch T., umqoqi wokucindezela ophephile oqondisayo uzoqondisa izinga lokushisa eliphezulu kanye negesi yokucindezela okukhulu ngaphandle kwekhabhinethi, eqinisekisa ngokugcwele ukuphepha kwabaqhubi nezinye izinto zokusebenza.
Amakamelo wezinsimbi afakwe amafuse ane-voltage ephansi, izinto zokuvikela ukudluliselwa, namakhadi kagesi.Uma igumbi linganele, ibhokisi lensimbi lingangezwa phezulu kwekhabhinethi.
I-clamp yekhebula enosayizi ofanele wekhava yokuvala kanye nobakaki wegumbi lekhebula eliphansi.
CHA. Igama Amayunithi Izinombolo Ukuphawula
1 I-voltage elinganiselwe KV 12 F, FR
2 Ikalwe imvamisa HZ 50 F, FR
3 Ikalwe okwamanje A 630 F, FR
4 Ubuningi be-fuse current A 125 F, FR
5 Ilinganiselwe isikhathi esifushane ukumelana namanje KA 25 F
6 Ilinganiselwe ubude besifunda esifushane S 4 F
7 Isilinganiso esiphezulu esibekezeleleka samanje KA 63 F
8 Isilinganiso sokuvala sesifunda esifushane KA 63 F
9 Ilinganiswe ngokulayisha okusebenzayo okwamanje A 630 F
10 Ukuphuka kwe-loop evaliwe A 630 F
11 Ikalelwe Ukushaja Ikhebula Okwamanje A 10 F
12 Ukumelana kwesekethe okuyinhloko μΩ ≤ 150 F
13 Dlulisa okwamanje A 1700 FR
14 Ilinganiselwe ngokuphulwa kwesekethe emfushane KA 50 FR
15 I-Main Circuit Back Resistance (Ayikho i-Fuse) Μω ≤ 250 FR
16 Ibanga elifanayo mm 210±5 F, FR
17 Ibanga eliphezulu lamandla okusebenza Iyavala Nm 8~100 F, FR
18 Ibanga eliphezulu lamandla okusebenza Iyavala Nm 8~100 Umsebenzi wokugawula
19 Ilinganiselwe ukumelana nesikhathi esifushane sokushintsha kwaphansi KA 25 F
20 Ilinganiswe ngobude besekethe emfushane yokushintshwa komhlaba S 3 F
21 I-Nominal Peak Tolerance yamanje ye-Grounding Switch KA 63 F
22 Iminithi elingu-1 elilinganiselwe imvamisa yamandla esikhathi esifushane ukumelana ne-voltage I-Interphase nesihlobo KV 42 F, FR
Ukuphuka okukodwa 48
23 Isilinganiso sombani oshukumisa amandla kagesi ahlala isikhathi eside I-Interphase nesihlobo KV 75
Ukuphuka okukodwa 85
24 Impilo yemishini Layisha switch Izinga lesibili 2000
Iswishi yokuhlukanisa 2000
25 Izinga lokuvikela IP3X
Okwedlule: Umhlinzeki Ongcono Kakhulu we-KYN28A-12 Wensimbi Yangaphakathi Ohlomile Wokukhipha I-Switchgear
Olandelayo: I-Wholesale Price ye-HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Insimbi Elungisiwe Yensimbi Evaliwe I-Loop Switchgear-shengte